December 2016 – Dhammadīpa
Posted on 31 Dec 2016 by Ashin Sopāka
“Monks, there are these five modes of speech which people might use when speaking to you — speech that is timely or untimely, true or false, gentle or harsh, withagood oraharmful motive, and withaloving heart or hostility. Monks, some might speak to you using speech that is timely or untimely; monks, some might speak to you according to truth or falsely; monks, some might speak to you gently or harshly; monks, some might speak to you withagood motive or withaharmful motive; monks, some might speak to you withaloving heart or with hostility. On all occasions, monks, you should train yourselves thus: ‘Neither shall our minds be affected by this, nor for this matter shall we give vent to evil words, but we shall remain full of concern and pity, withamind of love, and we shall not give in to hatred. On the contrary, we shall live projecting thoughts of universal love to that very person, making him as well as the whole world the object of our thoughts of universal love — thoughts that have grown great, exalted and measureless. We shall dwell radiating these thoughts which are void of hostility and ill will.’ It is in this way, monks, that you should train yourselves.” – MN 21 (Buddharakkhita)
“Pañcime, bhikkhave, vacanapathā yehi vo pare vadamānā vadeyyuṁ—kālena vā akālena vā; bhūtena vā abhūtena vā; saṇhena vā pharusena vā; atthasaṁhitena vā anat­tha­saṁhi­tena vā; mettacittā vā dosantarā vā. Kālena vā, bhikkhave, pare vadamānā vadeyyuṁ akālena vā; bhūtena vā, bhikkhave, pare vadamānā vadeyyuṁ abhūtena vā; saṇhena vā, bhikkhave, pare vadamānā vadeyyuṁ pharusena vā; atthasaṁhitena vā, bhikkhave, pare vadamānā vadeyyuṁ anat­tha­saṁhi­tena vā; mettacittā vā, bhikkhave, pare vadamānā vadeyyuṁ dosantarā vā. Tatrāpi vo, bhikkhave, evaṁ sikkhitabbaṁ: ‘na ceva no cittaṁ vipariṇataṁ bhavissati, na ca pāpikaṁ vācaṁ nicchāressāma, hitānukampī ca viharissāma mettacittā, na dosantarā. Tañca puggalaṁ mettā­saha­gatena cetasā pharitvā viharissāma, tadārammaṇañca sabbāvantaṁ lokaṁ mettā­saha­gatena cittena vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyābajjhena pharitvā viharissāmā’ti. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabbaṁ.”
“အသျှင်ဘုရား ဤမြေကြီးသည် ထုထည် ထူထဲ၍ (အနံ) အပိုင်းအခြားပမာဏ မရှိသောကြောင့်ထိုမြေကြီးကို မြေကြီးမဟုတ်အောင် ပြုရန် မလွယ်ပါ။ ထိုယောကျာ်းသည် ပင်ပန်းရုံ ဆင်းရဲရုံမျှသာဖြစ်ရာပါ၏ဟု (လျှောက်ကြားကြကုန်၏)။ ရဟန်းတို့ ဤအတူပင် သင့်လျော်သော အခါအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မသင့်လျော်သော အခါအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဟုတ်မှန်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မဟုတ်မမှန်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သိမ်မွေ့ (ပြေပြစ်) သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကျိုး (အကြောင်း) နှင့်စပ်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကျိုး (အကြောင်း) နှင့် မစပ်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မေတ္တာစိတ်ရှိကုန်၍လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှားသော စိတ်ရှိကုန်၍လည်းကောင်းသင်တို့ကို သူတစ်ပါးတို့က ပြောဆိုမှု ပြောဆိုနိုင်ရာသော စကားလမ်းကြောင်းတို့သည် ဤငါးပါးတို့တည်း။ ရဟန်းတို့ သင့်လျော်သောအခါအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မသင့်လျော်သောအခါအားဖြင့်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးတို့ကပြောဆိုမူ ပြောဆိုကုန်ရာ၏၊ ဟုတ်မှန်သောအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်မမှန်သောအားဖြင့့််ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးတို့က ပြောဆိုမူ ပြောဆိုကုန်ရာ၏၊ ရဟန်းတို့ သိမ်မွေ့ (ပြေပြစ်) သောအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြမ်းတမ်းသောအားဖြင့်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးတို့က ပြောဆိုမူ ပြောဆိုကုန်ရာ၏၊ အကျိုး (အကြောင်း) နှင့် စပ်သောအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကျိုး (အကြောင်း) နှင့် မစပ်သောအားဖြင့်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးတို့က ပြောဆိုမူ ပြောဆိုကုန်ရာ၏၊ မေတ္တာစိတ်ရှိကုန်၍ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှားသောစိတ်ရှိကုန်၍ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးတို့က ပြောဆိုမူ ပြောဆိုကုန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့ ထိုသို့ (ပြောဆိုရာ) စကားလမ်းကြောင်းတို့၌လည်း သင်တို့သည် ဤသို့ ကျင့်ရမည်၊ “ငါတို့၏ စိတ်သည် ဖောက်ပြန်မှု မဖြစ်လတ္တံ့၊ ယုတ်ညံ့သော စကားကိုလည်း မမြွက်ဆိုကြကုန်အံ့၊ အစီးအပွားဖြင့် ငဲ့ညှာကြကုန်လျက်လည်း မေတ္တာစိတ်ရှိကြကုန်၍ ပြစ်မှားသောစိတ် မရှိကြဘဲ နေကြကုန်အံ့၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ် ကိုလည်း မေတ္တာနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ဖြင့် ဖြန့်၍ နေကြကုန်အံ့၊ အကြွင်းမဲ့ သတ္တဝါအားလုံးကိုလည်း ထိုမေတ္တာစိတ်၏ အာရုံပြုလုပ်လျက် ပြန့်ပြောသော မြတ်သည်၏ အဖြစ်သို့ ရောက်သောအပိုင်းအခြား ပမာဏမရှိသော ရန်မရှိသော ဆင်းရဲခြင်းမရှိသော မြေကြီးနှင့် တူသော စိတ်ဖြင့် ဖြန့်၍နေကြကုန် အံ့” ဟု ဤသို့လျှင် သင်တို့ကျင့်ရမည်။”
“Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ngươi có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn thực, nhu nhuyến hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời chơn thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân”. Chư Tỷ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập.”
Blue Throated Bee Eater ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged compassion, dhamma, loving kindness, speech
Posted on 17 Dec 2016 by Ashin Sopāka
“One deluded does not know the good,
One deluded does not see the Dhamma;
Blinding darkness then prevails
When delusion overwhelmsaperson.
“But one who has abandoned delusion
Is not bewildered by confusing things.
He puts an end to all delusion
As the sunrise dispels the dark.” – Iti 88 (83)
“Mūḷho atthaṁ na jānāti,
mūḷho dhammaṁ na passati;
Andhatamaṁ tadā hoti,
yaṁ moho sahate naraṁ.
“Yo ca mohaṁ pahantvāna,
mohaneyye na muyhati;
Mohaṁ vihanti so sabbaṁ,
“မောဟသည် အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေတတ်၏။
မောဟသည် စိတ်ကို ချောက်ချားစေ တတ်၏။
အတွင်းစိတ်၌ ဖြစ်သော မောဟဟူသော ဘေးကို လူအပေါင်းသည် မသိနိုင်။
တွေဝေသူသည် အကျိုးကို မသိ၊ တွေဝေသူသည် တရားကို မမြင်၊
အကြင် အခါ၌ မောဟသည် လူကို လွှမ်းမိုးဖိစီး၏။ ထိုအခါ၌ အမိုက်တိုက်သဖွယ် ဖြစ်၏။
“အကြင်သူသည် မောဟကို ပယ်သောကြောင့် တွေဝေဖွယ် ရူပါရုံစသည်၌ မတွေဝေ၊
ထွက်ပေါ်လာသော နေမင်းသည် အမိုက်တိုက်ကို ပယ်ဖျောက်သကဲ့သို့
ထိုသူသည် အလုံးစုံသော မောဟကို အကြွင်းမဲ့ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။”
“Loài Người không rõ biết lòng si đặc biệt ấy
Người si không rõ biết đâu chính là lợi ích,
“Ai đoạn trừ được si, không si việc đáng si,
Vị ấy quét sạch được tất cả mọi si ám,
Mrs. Gould’s Sunbird ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged delusion, dhamma, moha
Posted on3Dec 2016 by Ashin Sopāka
This really is the best kind of speech.” Thag 21.1
“Tameva vācaṁ bhāseyya,
yāyattānaṁ na tāpaye;
Pare ca na vihiṁseyya,
Yaṁ anādāya pāpāni,
paresaṁ bhāsate piyaṁ.
“Saccaṁ ve amatā vācā,
“Yaṁ buddho bhāsati vācaṁ,
sā ve vācānamuttamā”.
အကြင်စကားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မပူပန်မနှိပ်စက်ရာ သူတပါးတို့ကိုလည်း မညှဉ်းဆဲမနှိပ်စက်ရာ ထိုစကားသည်သာ ကောင်းစွာ ဆိုအပ်သော စကားမည်၏၊ ထိုစကားကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။
ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာလျှင် ဆိုရာ၏၊ အကြင်စကားသည် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်၏၊ ထိုစကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ သူတပါးတို့အား ပြောဆိုသည်ရှိသော် သူမနှစ်မြို့ဖွယ်ယုတ်ညံ့သောစကားတို့ကို မယူမူ၍ ချစ်ဖွယ်သောစကားကို ပြောဆိုရာ၏။
မှန်သောစကားသည် စင်စစ် အမြိုက်သုဓာဘုတ်နှင့်တူ၏၊ ဤမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းသဘောသည် ရှေးသူဟောင်းတို့ ထုံးဟောင်းတံထွာ ဖြစ်၏၊ ယူတော်ကောင်းတို့သည် မှန်သောစကား၌၎င်း အကျိုးတရား၌၎င်း အကြောင်းတရား၌၎င်း တည်ကုန်၏ဟု ဆိုကြကုန်ပြီ။
မြတ်စွာဘုရားသည် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ခြင်းငှါ ဝဋ်ဆင်းရဲအဆုံးကို ပြုခြင်းငှါးဘေးမရှိသော အကြင်စကားကို ဆိုတော်မူ၏၊ ထိုစကားသည်သာ စကားတကာတို့ထက်လွန်မြတ်၏။
“Nên nói chỉ lời nói ấy thôi,
với lời nói ấy không làm cho bản thân nóng nảy,
và không hãm hại người khác;
đúng vậy lời nói ấy đã được khéo nói.
“Nên nói chỉ mỗi lời êm ái,
là lời nói được hoan hỷ đón nhận.
Nên nói lời êm ái là lời nói
không đem đến các điều ác xấu cho những người khác.
“Đúng vậy, chân thật là lời nói bất tử,
điều ấy là quy luật muôn đời.
Những người tốt đã được đứng vững ở sự thật,
ở mục đích, và ở Giáo Pháp đã nói (như thế).
“Lời đức Phật nói là an toàn,
đưa đến sự đạt được Niết Bàn,
đưa đến sự thực hiện việc chấm dứt khổ đau;
đúng vậy lời nói ấy là tối thượng.”
Common Kingfisher ©Ashin Sopāka 2016